Ara Malikian, Mpitety Vazantany Sy Mpitendry Lokanga · Global Voices teny Malagasy
Ara Malikian, Mpitety Vazantany Sy Mpitendry Lokanga
Voadika ny 21 Avrily 2017 6:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, Ελληνικά, Esperanto , English
Ara Malikian mandritra ny fampisehoana. Sary nasehon'ny BG Sound Dingana, nahazoan-dàlana.
Lazaina hoe mpitendry lokanga lalin-tsaina izy. Armeniana lehibe tany Libanona i Ara Malikian, nianatra mozika tany Alemana sy Angletera ary monina any Espaina amin'izao fotoana izao. Vao haingana no lasa mpitendry lokanga tao amin'ny Amboarampeon'ny Mpanjaka any Madrida izy. Mitety an'izao tontolo izao mba hanao fampisehoana any amin'ireo trano fanaovana lanonana i Malikian, mandeha irery na miaraka aminà amboarampeo..
Tamin'ny faran'ny volana Febroary, nanao fampisehoana tao Sofia any Bolgaria i Malikian. Ny volana manaraka dia anjaran'ny tany Ankara, any Torkia. Nanana dikany manokana ity seho faharoa ity, mampiseho ny hevitr'i Malikian mahakasika ny vonomoka armeniana, izay notsarovany tamin'ny Septambra 2015 niaraka tamin'ny fampisehoana tany Saragosse sy Madrida.
Nanao fampisehoana ho firaisankina amin'ireo mpitsoaponenana any Libanona koa i Malikian. Eo amin'ny fiainany toy ny eny ambony lampihazo, lasa mariky ny fiombonana ara-kolotsaina ho an'ireo mpankafy azy izy, mampiray ny mozika any afovoan'i Eoropa, Arzantina ary Espaina ary ny kolontsaina arabo sy jiosy.
Ny rain'i Ara Malikian, armeniana mpitendry lokanga tsy matihanina, no nampiditra azy tao anatin'ny tontolon'ny mozika fony izy mbola zaza, tamin'ny nampianarany azy ny mozika libaney. Niainga avy tamin'ny fahazazany ny rakikiran'i Malikia farany, “Ny tantara tsy mampinon'ny lokanga iray”. Nanao ny fampisehoany voalohany izy tamin'ny faha-12 taonany. Tamin'izy feno 15 taona, nahazo ny vatsim-pianarana hidirana ao amin'ny kaonservatoaran'i Hannovre izy. Avy eo nanohy ny fiofanany tany Londona.
Nihaona tamin'i Malikian i Nevena Borisova avy amin'ny Global Voices ary niresaka taminy momba ny fiainany sy ny mozikany.
Nevena Borisova (NB) : Manan-karena be ny torohay momba anao. Sarotra hoe aiza ny hanombohana azy… Mpitety vazantany amin'ny fanahy, amin'ny maha-olom-pirenena ianao. Fa aiza ianao no tena mahatsapa hoe ao amin'ny taninao?
Ara Malikian (AM) : Raha ny tena marina, na aiza na aiza. Mahatsapa tena ho eto amin'ny taniko aho eto Bolgaria, satria nandray ahy tamim-pitiavana lehibe ianareo Bolgara. Ary mahatsapa ho manana fahatokiana be aho eto. Nivezivezy im-betsaka aho nandritra ny fiainako ka izany no nahaizako nianatra hahatsapa ho eo amin'ny taniko na taiza na taiza niaraka tamin'ny olona rehetra. Fa ny tena manan-danja be amiko ao amin'ny toerana iray dia ny olona. Rehefa mihaona amin'ny olona izay tsapako fa akaky ahy aho, dia mahatsapa ho eo amin'ny taniko.
NB : Inona ny maha-samy hafa ireo rakikiranao roa farany?
AM : Alohan'ny zavatra rehetra, ahitana ny famoronako manokana ny rakikirako farany. Na oviana na oviana tany aloha, tsy izaho no namorona ireo rakikirako, fa tamin'ity farany ity tena niasa mafy tamin'ny famoronana aho ary izany no antony maha-faly ahy fa vita ilay izy. Ankoatra izany, manam-bahiny aho ato anatin'ity rakikira ity. Nanana vahiny betsaka aho. Nanana fandraisampeo maro mivantana teny an-tsehatra izahay. Tena manokana ity rakikira farany ity — tena vaovao be amiko.
NB: Nanao karazana mozika maro ianao: klasika, arzantina (tango), ny tatsinanana, espaniola… Inona avy ireo loharano lehiben'ny aingam-panahinao? Inona avy ireo karazana mozika izay tena nanamarika anao tamin'ny rakikiranao farany?
AM: Tsy voafehiko hoe avy aiza ny aingam-panahy. Nanana vintana aho afaka nitendry niaraka tamin'ny mpanao mozika avy amin'ny toerana maro, karazana maro. Nanome aingam-panahy ahy ny tsirairay tamin'izy ireo. Nampianatra zavatra maro ahy ny tsirairay tamin'izy ireo. Rehefa manao mozika aho, avy any amin'ny fara-hatoko no iaviany, izay raha ny tena marina no tena zava-tsarobidy. Ao anatin'ilay rakikira, samy hafa amin'ny teo alohany, na ny manaraka azy ny hira tsirairay. Misy karazany maro samy hafa izy ireo. Toy izany no fomba fahitako sy fanaovako mozika, Izany no fomba fihevitro ny mozika. Ho leo aho raha hanao zavatra mitovy foana.
NB: Nifandray taminà kolontsaina maro ianao. Mitovy amin'ny porofo velona manambara fa misy teboka maro ifandraisany ny kolontsaina rehetra. Noho izany, ahoana no hanazavanao ireo fifandirana izay hitantsika ankehitriny eto amin'izao tontolo izao?
AM: Maro ny olona no kivy miaina miaraka amin'ireny fifandirana ireny. Mpitsoaponenana, ady, fampihorohoroana… Lafiny tena ratsy amin'izao tontolo izao izany. Mino aho fa ny làlana tokana hivoahana amin'ireny ady ireny dia ny zavakanto, ny mozika, ny kolontsaina. Afaka miova amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny kolontsaina hafa mifototra amin'ny fanajàna ny hevitry ny hafa sy ny fomba fisainana izao tontolo izao. Avy amin'ny zavakanto no ahafahana mahazo kokoa hoe, na samy hafa aza, manana zavatra iraisana isika rehetra. Izany no antony inoako fa na ho ela na ho haingana, ny kolontsaina sy ny zavakanto no hamonjy ny olombelona… Mino izany aho.
NB: Tamin'ny 1899, nanokana ny tononkalony “Armeniana” ho an'izay manjo ny vahoaka armeniana ilay poeta bolgara Peyo Yavorov. Vao teo no nilaza ianao fa afaka manova izao tontolo izao ny zavakanto. Mino ve ianao fa ny artista amin'izao fotoana izao dia mieritreritra izany ary mandray anjara feno, ho an'izao tontolo izao tsaratsara kokoa, amin'ny olana ankehitriny?
AM: Misy artista maro izay mandray anjara ary miezaka ny hanatsara izao tontolo izao, fa mazava ho azy misy ihany koa ny sasany izay mihevitra kokoa amim-pitiavan-tena sy tsy miraharaha izay manjo eo amin'ny lafiny toekarena sy ny politika … Ary mazava ho azy koa fa tsy liana loatra amin'ny maha-olona. Misy foana araka izany fifandonana eo amin'ireo fomba fihevitra ireo. Fa toa miha-tsara izao tontolo izao amin'izao fotoana izao amiko, na mihevitra aza isika fa tena ratsy izy. Na ho ela na ho haingana ho azon'ny olona fa tsy ho afaka hiaina raha tsy misy fifanajàna, eo amin'ny fahasamihafàn-tsika, hevitra, lahatra ary fomba fiainana samy hafa.
NB : Efa niaina tany Afovoany Atsinanana, tany Beiroty ianao. Tao aminà tafatafa, nilaza ianao fa ny mozika tatsinanana dia tena tony, ary mety malefaka sy milamina. Nahoana àry no tsy ahitana filaminana any amin'iny faritra iny.
AM: Mety ho izany ny mozika tatsinanana, mety ho tena, tena mihetsiketsika be koa izy. Misy karazany roa io mozika io. Amin'ny fo tsy miangatra, tsy fantatro hoe maninona no misy ady be dia be… Angamba mety hoe mafana rà izahay, aiza no ahalalako [mihomehy izy]… Nipetraka taona maro tany Libanona aho ary manana namana maro izay arabo sy jiosy. Amin'ny ankapobeny, miaina tsara izy ireo, fa raha vao resaka momba ny tombontsoa ara- toekarena, politika, miova ny zavatra. Mino aho fa raha mba miaraka miaina fotsiny ny olona, tsy hanana olana izy ireo. Fa raha mbola ireny tombontsoa ireny sy ny mpitarika no manindry, miteraka fankahalàna, haromotana izy ireny, ary izany no mitarika ho any amin'ny ady. Fa mino aho fa ny olona tsotra tsy mitady ady. Tsaroako fony izaho niaina tany Libanona, tsy te-hiaina ady izahay, niaina tamin'ny fotoanan'ny ady izahay, fa tsy sitrakay izany…
NB : Taona vitsivitsy lasa izay, nanao seho ho firaisankina amin'ireo mptsoaponenana any Libanona ianao. Inona no niova tao Libanona hatramin'ny fahatsiarovanao farany?
AM : Tsy toy ny taloha intsony i Libanona. Tamin'izaho niala tany, tao anaty ady tanteraka ny firenena. Amin'izao fotoana izao, toa misy karazana fandriampahalemana any, mifanaja ny olona ary manaja ny fahasamihafàny izy ireo. Azo antoka fa misy ankehitriny ny olana hafa sy vaovao mifandray amin'ny zavamisy mahakasika ny mpitsoaponenana. Tsy maintsy jerena amin'izao fotoana izao ny fomba hanatsarana ny fiainan'ireo mpitsoaponenana, mba hahafahan'izy ireo manana hoavy. Izay namoy ny fianakaviany, ny fonenany, ary ny asany, ireo olona ireo dia tsy afaka hiverina any amin'ny taniny… Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra hamahàna ny olana dia ny fisian'ny fandriampahalemana ao amin'ny taniny, mba hahafahan'izy ireo mody ary miverina amin'ny fiainany… Fa mandra-podin'izy ireo, tsy maintsy manampy azy ireo isika.
Ara Malikian mandritra ny fampisehoana. Sary nasehon'ny BG Sound Stage, nahazoana alalana.
NB : Nanao seho ho firaisankina niaraka tamin'ny Armeniana sy ho fiarovana izay antsoin'ny Armeniana hoe tsy rariny ara-tantara ianao. Inona avy ireo fanamby tena lehibe ho an'ny Armeniana ankehitriny?
AM : Armeniana no fototra nipoirako, miteny armeniana aho, ary manao mozika armeniana koa, fantatro ny kolontsaiko… Izahay Armeniana dia miezaka ny handresy lahatra izao tontolo izao mba hanaiky ilay fandripahana foko, izay adino ankehitriny. Miezaka izahay mba ho ekena amin'ny fomba ofisialy izany, mba hanitsiana ny dindony ara-tantara. Izany no ezahinay atao. Ny tsy tokony ataonay ankehitriny, dia ny manangana fankahalana ny Tiorka. Mino aho fa ireo Tiorka ankehitriny dia tsy fahavalonay. Ekena, tokony hanaiky ilay fandripahana foko izy ireo, ireo heloka bevava rehetra vita. Fa mino aho fa ho soa ho an'ny fifandraisanay, tsy tokony hijery azy ireo ho toy ny fahavalonay izahay, ary tokony hanàja ary ireo. Tokony hiezaka ny hiteny amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra mba hiezaka hamaha ny olana.
NB: Nivoaka tamin'ianao mbola ankizy ny talentanao, niaraka tamin'ny ady tany Libanona ao ambadika. Ahoana no amaritanao ny fahazazanao?
AM : Na niseho nandritra ny ady aza ny fahazazako, dia tena manana tsiaro tsara amin'izany aho. Nanana namana aho, nanararaotra ny fisian'ny fianakaviako aho, ny reniko sy ny raiko. Ny mampalahelo fotsiny dia fohy loatra ny fahazazako, satria nandeha tany Alemaina aho [mba handranto fianarana tao amin'ny kaonservatoara]. Fa izay no lahatra ho ahy: ny hanana fahazazana fohy, saingy niaina azy an-kalalahana.